ဇီဇာကြောင်လွန်းတဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားများ အပိုင်း (၂)
ဇီဇာကြောင်လွန်းတဲ့ နာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားများ (၂)
12 Nov 2018 . 1:21 PM
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဇီဇာကြောင်တဲ့လူတွေကို တွေ့ဖူးကြမှာပေ့ါ။ တချို့ဆိုရင် ဇီဇာကြောင်လွန်းလို့ အပေါင်းအသင်း သိပ်မရှိတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြတယ်။ ဒါဟာ သာမန်လူတွေတင် မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့်ကို ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား တချို့မှာလည်း ဇီဇာကြောင်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေရှိကြတယ်။ အဲဒီသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ ပရိသတ်တွေအတွက် ဗဟုသုတရအောင် အပိုင်း(၂)အဖြစ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
ပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့ နာမည်ကျော် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အဒီဘာယောဟာ လိုင်ယွန်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ နီးစပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ မတန်တဆ လိုအင်ဆန္ဒကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့က ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ သူ တောင်းဆိုတာကိုလည်း ကြည့်လေ။ Mediterranean ပယ်လယ်မှာရှိတဲ့ Corsica ကျွန်းမှာ စံအိမ်ကြီးတစ်ခု ဆောက်ပေးရမယ်၊ သီးသန့် စားဖိုမှူးထားပေးရမယ်၊ လာကာဇက် Alexandre Lacazette ရဲ့ နံပါတ် (၁၀)ကိုလည်း ပေးရမယ်ဆိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ရလဒ်ကတော့ လိုင်ယွန်အသင်းဟာ အဒီဘာယောနဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စ ဆွေးနွေးမှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာပါပဲ။
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ပြင်သစ်ထိပ်သီး PSG အသင်းကနေ တရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ် ဟိုင်ဘေဖော်ကျွန်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ လာဗက်ဇီဟာ ကမ္ဘာ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားတစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ လာဗက်ဇီဟာ အဲဒီလောက်နဲ့ မတင်းတိမ်သေးပါဘူး။ သူက အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်း (၂)လုံး၊ ကား(၂)စီး၊ ရဟတ်ယာဉ် (၁)စင်း၊ သီးသန့်စားဖိုမှူးတွေ စီစဉ်ပေးဖို့ ဟိုင်ဘေဖော်ကျွန်း တာဝန်ရှိသူတွေကို တောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။
ဟူဂိုလိုရစ် Hugo Lloris
စပါးအသင်းရဲ့ ပြင်သစ်ဝါရင့် ဂိုးသမားကြီး ဟူဂိုလိုရစ်ကျတော့ တစ်မျိုးတစ်ဘာသာပါ။ စပါးအသင်းနဲ့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်ထဲမှာ အသင်း ရှုံးသည်ဖြစ်စေ၊ နိုင်သည်ဖြစ်စေ သူ့ကို Bonus ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းပါဝင်ပါတယ်။ အသင်းနိုင်လို့ Bonus ပေးရတာက သိပ်မဆန်းပေမယ့် ရှုံးပွဲတွေ့လည်း Bonus ပေးရတာကတော့ ရှားပါးလွန်းပါတယ်။ လိုရစ်ရဲ့ စာချုပ်ထဲမှာ သူ ပွဲထွက်ကစားမယ်ဆိုရင် ပေါင်(၇၀၀၀)၊ အသင်းနိုင်ရင် ပေါင်(၈၀၀၀၀)၊ သရေ ဒါမှမဟုတ် ရှုံးသည်ဖြစ်စေ ပေါင်(၃၅၀၀)ပေးရမယ်လို့ ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားတယ်။ လိုရစ်ကို ဆုကြေးမပေးရအောင် စပါးအသင်းကပဲ ပြိုင်ဘက်ကို တမင်တကာ အရှုံးပေးရမယ့်ပုံပါပဲ။
ဘာစီလိုနာနဲ့ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တုန်းက ဗာမယ်လန်းဟာ အချက်တစ်ချက်ကို ထည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူ ပုံမှန်ကစားနေကျ Centre Back မဟုတ်ဘဲ တခြားနေရာမှာ ကစားခိုင်းရင် ယူရို(၁)သိန်း ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်မှန်းတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။
အဂ္ဂါ Daniel Agger
လီဗာပူးလ် နောက်ခံလူဟောင်း ဒန်နီယဲလ်အဂ္ဂါကို ပရိသတ်တွေ မှတ်မိကြဦးမှာပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ လီဗာပူးလ်ကနေ ဘရွန်ဘီကို ရုတ်တရက် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သူ အဂ္ဂါဟာ ဘရွန်ဘီနဲ့ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ စာချုပ်ထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား အချက်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းခဲ့တယ်။ ဒါကတော့ ဘရွန်ဘီအသင်းရဲ့ အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်တွေကစားရင် အသင်းအင်္ကျီမှာ သူရဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Kloagger နာမည်ကို ရိုက်နှိပ်ပြီး ၀တ်ဆင်ကစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။ ကုမ္ပဏီကို Promotion ဆင်းတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား။
ဗန်ဒါဗတ် Van der Vaart
မကြာသေးခင်ကမှ ဘောလုံးသမားဘ၀က အနားယူသွားတဲ့ ဗန်ဒါဗတ်ရဲ့ ဇီဇာကြောင်ပုံကလည်း ထူးဆန်းပါတယ်။ ဘက်တစ်အသင်းမှာ ကစားခဲ့တုန်းက သူဝတ်ဆင်မယ့် ဘောကန်ဖိနပ်အရောင်ထဲမှာ အနီရောင်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့ ဘယ်အရောင်မဆို ၀တ်ဆင်ကစားခွင့်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို ထည့်သွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မွိုက်စ်ကိန်း Moise Kean
ဒီကစားသမားက နာမည်မကြီးပေမယ့် သူ့အဖြစ်ကလည်း ရယ်စရာကောင်းလို့ ထည့်သွင်းထားတာပါ။ အသက်(၁၈)နှစ်သာ ရှိသေးတဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်လူငယ်ကြယ်ပွင့် မွိုက်စ်ကိန်းဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ အရမ်းနီးစပ်တဲ့အခြေအနေကို ရောက်ပြီး သူ့အဖေရဲ့ ကန့်ကွက်မှုကြောင့် ပျက်ပြယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အဖေက ဘာလို့ ကန့်ကွက်တာလဲဆိုတော့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ သူတို့ ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်း လယ်ထွန်စက်နဲ့ စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်းတွေကို မ၀ယ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့် စာချုပ်သစ်ကိစ္စကို ကန့်ကွက်ခဲ့တာပါတဲ့။
ပရိသတ်ကြီးရေ .. ဘောလုံးသမားတွေရဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေကလည်း တစ်မျိုးတစ်ဘာသာပါပဲ။ ပရိသတ်တွေ ဒီ Article ကို ဖတ်ပြီး ဗဟုသုတရနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ပါတယ် . . .
Photo:FOX Sports Asia,Pinterest,Evening Standard,Twitter,Yahoo! Sports,ESPN
ဇီဇာကွောငျလှနျးတဲ့ နာမညျကြျောဘောလုံးသမားမြား (၂)
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ ဇီဇာကွောငျတဲ့လူတှကေို တှဖေူ့းကွမှာပေ့ါ။ တခြို့ဆိုရငျ ဇီဇာကွောငျလှနျးလို့ အပေါငျးအသငျး သိပျမရှိတဲ့သူတှလေညျး ရှိကွတယျ။ ဒါဟာ သာမနျလူတှတေငျ မဟုတျပါဘူး။ တကယျ့ကို ကမ်ဘာကြျောဘောလုံးသမား တခြို့မှာလညျး ဇီဇာကွောငျတဲ့ အကငျြ့စရိုကျတှရှေိကွတယျ။ အဲဒီသူတှကေ ဘယျသူတှလေဲဆိုတာ ပရိသတျတှအေတှကျ ဗဟုသုတရအောငျ အပိုငျး(၂)အဖွဈ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
ပရီးမီးယားလိဂျရဲ့ နာမညျကြျော တိုကျစဈမှူးဟောငျး အဒီဘာယောဟာ လိုငျယှနျအသငျးကို ပွောငျးရှဖေို့ နီးစပျခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရဲ့ မတနျတဆ လိုအငျဆန်ဒကွောငျ့ အပွောငျးအရှကေ့ ဖွဈမလာခဲ့ဘူး။ သူ တောငျးဆိုတာကိုလညျး ကွညျ့လေ။ Mediterranean ပယျလယျမှာရှိတဲ့ Corsica ကြှနျးမှာ စံအိမျကွီးတဈခု ဆောကျပေးရမယျ၊ သီးသနျ့ စားဖိုမှူးထားပေးရမယျ၊ လာကာဇကျ Alexandre Lacazette ရဲ့ နံပါတျ (၁၀)ကိုလညျး ပေးရမယျဆိုပွီး ကွီးကွီးကယျြကယျြတှေ တောငျးဆိုခဲ့တယျ။ ရလဒျကတော့ လိုငျယှနျအသငျးဟာ အဒီဘာယောနဲ့ အပွောငျးအရှကေိ့စ်စ ဆှေးနှေးမှုကို ရပျဆိုငျးခဲ့တာပါပဲ။
၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ ပွငျသဈထိပျသီး PSG အသငျးကနေ တရုတျစူပါလိဂျကလပျ ဟိုငျဘဖေျောကြှနျးကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ လာဗကျဇီဟာ ကမ်ဘာ့ဝငျငှအေကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားတဈဦးအဖွဈ ရပျတညျနတော အားလုံးအသိပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ လာဗကျဇီဟာ အဲဒီလောကျနဲ့ မတငျးတိမျသေးပါဘူး။ သူက အိမျကွီးအိမျကောငျး (၂)လုံး၊ ကား(၂)စီး၊ ရဟတျယာဉျ (၁)စငျး၊ သီးသနျ့စားဖိုမှူးတှေ စီစဉျပေးဖို့ ဟိုငျဘဖေျောကြှနျး တာဝနျရှိသူတှကေို တောငျးဆိုခဲ့ပါသေးတယျ။
ဟူဂိုလိုရဈ Hugo Lloris
စပါးအသငျးရဲ့ ပွငျသဈဝါရငျ့ ဂိုးသမားကွီး ဟူဂိုလိုရဈကတြော့ တဈမြိုးတဈဘာသာပါ။ စပါးအသငျးနဲ့ ခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ စာခြုပျထဲမှာ အသငျး ရှုံးသညျဖွဈစေ၊ နိုငျသညျဖွဈစေ သူ့ကို Bonus ပေးရမယျဆိုတဲ့ စညျးကမျးပါဝငျပါတယျ။ အသငျးနိုငျလို့ Bonus ပေးရတာက သိပျမဆနျးပမေယျ့ ရှုံးပှဲတှလေ့ညျး Bonus ပေးရတာကတော့ ရှားပါးလှနျးပါတယျ။ လိုရဈရဲ့ စာခြုပျထဲမှာ သူ ပှဲထှကျကစားမယျဆိုရငျ ပေါငျ(၇၀၀၀)၊ အသငျးနိုငျရငျ ပေါငျ(၈၀၀၀၀)၊ သရေ ဒါမှမဟုတျ ရှုံးသညျဖွဈစေ ပေါငျ(၃၅၀၀)ပေးရမယျလို့ ထညျ့သှငျးခြုပျဆိုထားတယျ။ လိုရဈကို ဆုကွေးမပေးရအောငျ စပါးအသငျးကပဲ ပွိုငျဘကျကို တမငျတကာ အရှုံးပေးရမယျ့ပုံပါပဲ။
ဘာစီလိုနာနဲ့ စာခြုပျခြုပျခဲ့တုနျးက ဗာမယျလနျးဟာ အခကျြတဈခကျြကို ထညျ့သှငျးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ သူ ပုံမှနျကစားနကြေ Centre Back မဟုတျဘဲ တခွားနရောမှာ ကစားခိုငျးရငျ ယူရို(၁)သိနျး ပေးရမယျဆိုတဲ့ အခကျြပါပဲ။ ဘယျလို ရညျရှယျခကျြမှနျးတော့ မပွောတတျပါဘူး။
အဂ်ဂါ Daniel Agger
လီဗာပူးလျ နောကျခံလူဟောငျး ဒနျနီယဲလျအဂ်ဂါကို ပရိသတျတှေ မှတျမိကွဦးမှာပါ။ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ လီဗာပူးလျကနေ ဘရှနျဘီကို ရုတျတရကျ ပွောငျးရှခေဲ့သူ အဂ်ဂါဟာ ဘရှနျဘီနဲ့ ခြုပျဆိုခဲ့တဲ့ စာခြုပျထဲမှာ ထူးထူးခွားခွား အခကျြတဈခုကို ထညျ့သှငျးခဲ့တယျ။ ဒါကတော့ ဘရှနျဘီအသငျးရဲ့ အိမျကှငျးပှဲစဉျတှကေစားရငျ အသငျးအင်ျကြီမှာ သူရဲ့ ကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ Kloagger နာမညျကို ရိုကျနှိပျပွီး ဝတျဆငျကစားရမယျဆိုတဲ့အခကျြပါပဲ။ ကုမ်ပဏီကို Promotion ဆငျးတယျလို့ပဲ ပွောရမလား။
ဗနျဒါဗတျ Van der Vaart
မကွာသေးခငျကမှ ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူသှားတဲ့ ဗနျဒါဗတျရဲ့ ဇီဇာကွောငျပုံကလညျး ထူးဆနျးပါတယျ။ ဘကျတဈအသငျးမှာ ကစားခဲ့တုနျးက သူဝတျဆငျမယျ့ ဘောကနျဖိနပျအရောငျထဲမှာ အနီရောငျကလှဲပွီး ကနျြတဲ့ ဘယျအရောငျမဆို ဝတျဆငျကစားခှငျ့ပွုရမယျဆိုတဲ့ အခကျြကို ထညျ့သှငျးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
မှိုကျဈကိနျး Moise Kean
ဒီကစားသမားက နာမညျမကွီးပမေယျ့ သူ့အဖွဈကလညျး ရယျစရာကောငျးလို့ ထညျ့သှငျးထားတာပါ။ အသကျ(၁၈)နှဈသာ ရှိသေးတဲ့ ဂြူဗငျတပျဈလူငယျကွယျပှငျ့ မှိုကျဈကိနျးဟာ အသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးတိုးဖို့ အရမျးနီးစပျတဲ့အခွအေနကေို ရောကျပွီး သူ့အဖရေဲ့ ကနျ့ကှကျမှုကွောငျ့ ပကျြပွယျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူ့အဖကေ ဘာလို့ ကနျ့ကှကျတာလဲဆိုတော့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ သူတို့ ကတိပေးထားတဲ့အတိုငျး လယျထှနျစကျနဲ့ စိုကျပြိုးရေးပစ်စညျးတှကေို မဝယျပေးတဲ့အတှကျကွောငျ့ စာခြုပျသဈကိစ်စကို ကနျ့ကှကျခဲ့တာပါတဲ့။
ပရိသတျကွီးရေ .. ဘောလုံးသမားတှရေဲ့ အကငျြ့စရိုကျတှကေလညျး တဈမြိုးတဈဘာသာပါပဲ။ ပရိသတျတှေ ဒီ Article ကို ဖတျပွီး ဗဟုသုတရနိုငျလိမျ့မယျလို့လညျး မြှျောလငျ့ပါတယျ . . .